Ny fanontanianao Tonga soa! Tiako ny fitsaboana Lithiumeel. Satria manana fampiharana roa izy ary mety ho hafa (tsy voalaza eto amin'ity boaty ity ity vaovao ity), azonao atao ny mandefa torolàlana, azafady. Tsara fanahy, Catherine.
Ny valiny dia.
Mampalahelo fa tsy afaka mandefa torolàlana isika. Mividy entana any Soisa izahay, ary tsy hisy torolàlana raha tsy mividy izahay. Azonao atao ny mijery ny lisitry ny fitaovana fitsaboana any Soisa ary ny baikon'ny laharana. Ny fanafody rehetra dia manana izany.
Soraty ao amin'ny info@swiss-apteka.com ny lahatsoratra ary hazava amintsika ny fisiany.
Amin'izao fotoana izao any Soisa dia tsy mividy izy io. Jereo ny dikan-teny alemana azo omena azy koa:
Fampiharana amin'ny aterineto
Mampidira anarana azafady
Midira finday azafady
Ampidiro azafady ny e-mailanao
Fenoy ny lahatsoratra fangatahana